Vaovao - Ahoana ny fisafidianana sivana trondro mety
Ahoana ny fisafidianana sivana trondro mety
Raha ampitahaina amin'ny tontolo voajanahary, ny hakitroky ny trondro ao anaty Aquarium dia lehibe dia lehibe, ary ny sisa tavela amin'ny trondro sy ny sisa tavela amin'ny sakafo. Ireo dia mamaky sy mamoaka amoniaka, izay manimba manokana ny trondro. Arakaraka ny fako dia mihabe ny amoniaka vokarina, ary miha haingana ny kalitaon'ny rano. Ny sivana dia afaka manadio ny fahalotoan'ny rano ateraky ny diky na ny bazana sisa tavela, ary mampitombo amin'ny fomba mandaitra ny ôksizenina voafafy ao anaty rano. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana izay tsy mety diso amin'ny fizotran'ny sakafo.
Ny sivana ambony dia midika ara-bakiteny ny rafitra filtration eo ambonin'ilay fitoeran-trondro, izay marina ihany koa.
Ny fitsipika mifehy ny sivana ambony dia ny paompin-drano hofehezina ao anaty fitoeran-tsivana, ary avy eo mikoriana miverina mankamin'ny fitoeran-trondro amin'ny alàlan'ny karazan-tsivana sy landihazo sivana. Avy eo dia mikoriana miverina mankany amin'ny fitoeran-trondro avy amin'ny fantsom-pivoahana any ambany izy.
Tombony amin'ny sivana
1. Vidiny mora
2. Fikolokoloana isan'andro
3. Ny vokatra filtration ara-batana dia tena mety
4. Tsy ilaina ny habaka misaraka
Tsy fahampian'ny sivana ambony
1. Mifandray amin'ny rivotra bebe kokoa, mora very ny karbaona dioksida
2. Izy no mibodo ny tapany ambony amin'ny aquarium, ary ratsy ny vokariny estetika.
3. Ny tapany ambony amin'ny aquarium dia raisina, ary voafetra ny toerana fametrahana jiro.
4. tabataba mafy
Ny sivana ambony dia atolotra ho an'ity manaraka ity
1. Ny Aquarium dia misy trondro sy makamba indrindra
2. Aquarium misy trondro lehibe ho tena vatana
Ny fampiasana ny sivana ambony dia tsy soso-kevitra amin'ireto toe-javatra manaraka ireto
1. VAT Vary
2. Ireo mpampiasa izay miahy ny tabataba
Ny sivana ivelany dia mampiato ny singa sivana amin'ny sisiny na ambony. Ny rano dia arotsaka ao anaty fitoeran'ny sivana amin'ny alàlan'ny paompy ao anaty rano, sivana amin'ny alàlan'ny fitaovana sivana, ary avy eo mikoriana mankany amin'ny aquarium.
1. Vidiny ambany
2. Kely habe, mora apetraka
3. Tsy mitazona ny habakabaky ny aquarium izy io, ary manana toerana fametrahana jiro be dia be.
4. Mora kokoa ny mandray oksizenina
1. Vokatry ny filtration ratsy
2. Mifandray amin'ny rivotra bebe kokoa, mora very ny gazy karbonika
3. Miaraka amin'ny haavon'ny rano samihafa, matetika dia misy feo mitete
4. Ireo fitaovana fanivanana dia mila ovaina indraindray.
Ny sivana ivelany dia ampiasaina amin'ny famakafakana manaraka
1. Izy io dia ampiasaina ho toy ny aquarium fiompiana zavamaniry anaty rano kely sy trondro tropikaly ambanin'ny 30cm
2. Ireo mpampiasa te-hifehy ny vidiny
Ny sivana ivelany dia tsy asaina amin'ireto toe-javatra manaraka ireto
Aquarium lehibe sy salantsalany
Namboarina tamin'ny sivana
Hevitra misongadina amin'ny sivana anatiny
2. Fametrahana mora
3. Famatsiana oksizena ampy
4. Napetraka ao anaty aquarium izy io ary tsy mibahana ny habaka ivelany
Ny fatiantoka ny sivana natsangana
1. Mety amin'ny aquarium kely ihany
2. Vokatry ny fanivanana ratsy
3. Misy ny feon'ny fiaramanidina
4. Ireo fitaovana fanivanana dia mila ovaina matetika.
5. Misy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny aquarium koa io
Ny sivana namboarina dia atolotra ho an'ireto toe-javatra manaraka ireto
Ny sivana namboarina dia tsy asaina rehefa
Aquarium mihoatra ny 60 cm
2. VAT Vary
Fanivanana spaonjy (fanahin'ny rano)
Ny sivana spaonjy dia karazana fitaovana fanivanana izay mila mampifandray paompy oksizenina sy fantson-drivotra, izay azo adika amin'ny rindrin'ny aquarium. Amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny varingarina kely izy io ary azo ampiasaina ho sivana fanampiny ho an'ny varingarina antonony.
Ny fitsipika dia ny fampiasana ny vokatry ny fitrandrahana rano rehefa mitombo ny manjary miboiboika ao anaty rano, izay afaka mifoka moka sy moka sisa tavela. Ho fanampin'izany, ny bakteria ao anaty landihazo sivana dia afaka mamongotra ara-pahombiazana ny zavatra biolojika, ka hahatratra ny tanjon'ny biofiltration amin'ny toerana kely.